ကလေးငယ်များအတွက် CPR - Hello Sayarwon
CPR ဟုလူသိများသော အရေးပေါ်နှလုံးနှိုး အသက်ကယ် နည်းသည် အသက်ကယ်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေး၏ အသက်ရှူခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးခုန်ခြင်းရပ်သွား သောအခါ ချက်ချင်းလုပ်ရသည်။
၎င်းသည် ရေနစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူမွန်းကြပ်ခြင်း၊ လေပြွှန်ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ CPR တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
အသက်ရှူသွင်းခြင်း။ ကလေး၏ အဆုတ်ကို အောက်စီဂျင် ပေးနိုင်သည်။
ရင်ဘတ်အားဖိခြင်း။ ကလေး၏ သွေးလှည့်ပတ်ခြင်း ကို ထိန်းပေးသည်။
ကလေး၏ သွေးစီးဆင်းမှု ရပ်သွားပါက မိနစ် အနည်းငယ် အတွင်း ဦးနှောက် အပြီးတိုင်ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံး ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည် ကလေး၏ နှလုံးခုန်သံနှင့် အသက်ရှူခြင်း ပြန်မရမချင်း သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှု အဖွဲ့ ရောက်မလာမချင်း CPR ဆက်လုပ်နေရမည်။
ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများနှင့် လက္ခဏာများက ဘာလဲ။
ကလေးတစ်ယောက်၏ နှလုံးခုန်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူခြင်း ကို ရပ်စေနိုင်သော အရာများစွာ ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရေနစ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်း၊ သွေး အလွန်အကျွံ ထွက်ခြင်း၊ ခေါင်း ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူ မွန်းကြပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ကလေးတွင် အသက်ရှူရပ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်း မမိခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း စသော လက္ခဏာများ တွေ့ပါက CPR လုပ်သင့်သည်။
အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ခေါ်ပါ။
သင်သည် သတိလစ်သွားသော သို့မဟုတ် အသက်မရှူ နိုင်သော ( ပင့်သက်ရှူနေသော) ကလေးတစ်ယောက်နှင့် ရှိနေပါက CPR ၂မိနစ် လုပ်ပြီး အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကို ခေါ်ပါ။ အခြားလူတစ်ယောက် ရှိပါက အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကို ခေါ်ရန် အော်ပြောပါ။ CPR စနေစဉ်အတွင်း AED ( နှလုံးပြန်ခုန်အောင် လျှပ်စစ် ရိုက်သော စက်) ကို ရှာခိုင်းထား ပါ။
ကလေးသည် သတိလစ်သွားသော်လည်း အသက်ရှူနေ သည်ကို ခံစားရပါက အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကို ခေါ်ပြီး အကူအညီကို စောင့်ပါ။ အသက်ရှူနေသော ကလေးကို CPR လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အသက်မရှူသောအခါ၊ အသက်ပင့်ရှူ သော အခါမှသာ လိုအပ်ပါသည်။
CPR ကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် သေချာ လေ့လာသင်ယူ ထားရမည်။
ကလေးအများစုသည် ရှောင်လွဲမရသော မတော်တဆမှု များကြောင့် CPR လိုအပ်သည်။ အောက်ပါအကြံပြုချက်များ သည် ကလေးများတွင် မတော်တဆမှုများ မဖြစ်အောင် ကူညီ ပေးနိုင်သည်။
မိသားစု လုံခြုံမှု၏ အဓိက သဘောတရားများကို သင့်ကလေးအား သင်ကြားပါ။
သင့်ကလေးအား ရေကူးတတ်အောင် သင်ပေးပါ။
သင့်ကလေးကို ကားများအား သတိထားတတ်ရန်နှင့် ဘေးကင်းစွာ စက်ဘီးစီးတတ်ရန် သင်ပေးပါ။
သင်သည် ကလေးများအတွက် ကားထိုင်ခုံ ခါးပတ် များသုံးရာတွင် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
သင့်ကလေးအား သေနတ်များ၏ ဘေးကင်းမှုကို သိရှိ အောင်လုပ်ပါ။ သင်သည် အိမ်တွင် သေနတ်များ ရှိပါက သီးသန့် ဗီဒိုထဲတွင် သော့ခတ်ပြီး သိမ်းထားပါ။
သင့်ကလေးကို မထိနှင့် ဆိုသော စကား၏ အဓိပ္ပါယ် ကို သေချာသိရှိအောင် လုပ်ပါ။
ကလေးတစ်ယောက် လုပ်နိုင်သော အရာကို ဘယ်တော့မှ လျော့မတွက်ပါနှင့်။ ကလေးများသည် ပစ္စည်းများကို သင်ထင် ထားသည်ထက် ပို၍ ရွေ့နိုင်၊ ကိုင်နိုင်သည်။ သင့်ကလေး နောက်ထပ် ဘာလုပ်နိုင်သည်ကို စဉ်းစား၍ အဆင်သင့် ပြင်ထားပါ။ ကလေးများသည် ဖက်တွယ်၍ တက်နိုင်သည်။ ခုံ အမြင့်များနှင့် ဘီးတပ် တွန်းလှည်းများတွင် လုံခြုံရေး အဝတ် ကြိုးပြား တပ်သင့်သည်။
အသက်အရွယ်နှင့် သင့်တော်သော အရုပ်များကို ရွေးချယ်ပါ။ လေးပြီး ကျိုးပဲ့လွယ်သော အရုပ်များကို ကလေး ငယ်များအား မပေးပါနှင့်။ သူတို့အရုပ်များတွင် သေးငယ်သော ပြုတ်နေသော အပိုင်းများ၊ ချွန်ထက်သော အစွန်းများ၊ ပြုတ်နေ သော ဘတ္တရီများ၊ အခြား အန္တရာယ်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ပါ။ အဆိပ်ဖြစ်စေသာ ဓါတုပစ္စည်းများ၊ ဆေးကြောသော အရည်များကို ကလေးများ မဖွင့်နိုင်သော ဗီဒိုများတွင် လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပါ။
ဘေးကင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး သင့် ကလေးများကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ရေ ပတ်လည်နှင့် ပရိဘောဂများအနီးတွင် ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ် ထွက်ပေါက်များ၊ မီးဖိုထိမ်နှင့် ဆေးဗီဒိုများသည် ကလေးငယ် များကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။
CPR for Children. http://www.webmd.com/first-aid/cardiopulmonary-resuscitation-cpr-for-children. Accessed March 10, 2017.
CPR – child (1 to 8 years old). https://medlineplus.gov/ency/article/000012.htm. Accessed March 10, 2017.